Blog of Nyein Chan Yar: This Thingyan
Posted by dathana at Saturday, April 21, 2007
Anonymous April 26, 2007 2:59 PM
glad you took photos, yeah it looks like everything has changed. hope you are doing good in ygn.
Anonymous May 01, 2007 4:12 PM
ကို/မ ဒဿနရေ… အစိမ်းနောက်ခံပေါ်က အနက်ရောင်စာလုံးတွေက ဖတ်လို့မရပါ၊ လုပ်ပါဦး။ ပို့စ်အသစ်များလည်း ဖြစ်နိုင်ရင် တင်ပါဦး။ ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်မှာ ဒီ ဘလော့ဂ်ကို လင့်ခ်လုပ်ထားပါတယ်။